IINGCAMANGO ZOKUHLALWA KWENDLU YANGASESE - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango zokuHlalwa kweNdlu yangasese
Iingcamango zokuHlalwa kweNdlu yangasese
Nazi iimbono zethu zokuhlambela izindlu zangasese kubandakanya i-beadboard, iphaneli ephakanyisiweyo, i-shiplap kunye noyilo lweethayile ekhayeni lakho.
Ukutsala ixesha elide bekusetyenziswa ngaphakathi ngaphakathi kuyo yomibini imisebenzi kunye nobuhle bayo. Nangona isimbo sendlela yoyilo, ukuvavanywa kwe-wains kuye kwasinda kule minyaka kwaye kusabonakala ezindlwini namhlanje Kubonakala ngathi kujongeka ngathi yipaneli yokuhombisa egubungela ezantsi kodonga ukusuka kumgangatho onyukayo. Ukufakwa kweemvula kungakhanyisa igumbi kwaye kubonelele ngesitayile sangaphakathi sendlela yoyilo lwangaphakathi.
Kumfanekiso wegumbi lokuhlambela ongentla ukuya kwisakhelo sebhafu yokuma sodwa, iindonga ezintathu ezazingqonge le ndlu zazixhonywe ngebhodi yebhodi ebiyelwe ngepeyinti emhlophe ukuze itshatise ucango neefestile.
Ukuphakama kokuVota kweNdawo yokuhlambela
Imifanekiso yeGumbi lokuhlambela eliGciniweyo
Shiplap Shiplap Wainscoting
Ukuvavanywa kwamanzi okuhlamba amancinci
Igumbi lokuhlambela eliGcina iithayile
Nazi iindidi eziqhelekileyo zezimvo zangasese:
Shiplap okanye Beadboard - enye yeentlobo eziqhelekileyo ezibonakaliswa lulwimi kunye noyilo lomjelo. (Jonga igalari yethu ye Izimvo zangasese Apha)
Iphaneli ephakanyisiweyo -Oku kumela isitayile sokukorekisha esidala / esiqhelekileyo esidityaniswe neepaneli ezisicaba kunye nokubumba.
Ibhodi kunye neBatten - le ndlela inobuhle obulula kwaye ihlala ifumaneka kumakhaya esitayile selizwe. Olu hlobo lufakwe ngokuthe ngqo eludongeni olukhoyo kwaye aludingi iibhodi ezicwangcisiweyo okanye iipaneli.
barn nge - ikwaqhelekile kumakhaya esitayile selizwe. Yenziwe ngebhodi ezixhasayo ze-T & G, ezifakwe ngokhuni kuwo omane amacala kunye notyikityo X embindini.
Ukuqotywa kwemifanekiso eqingqiweyo - ubukhulu becala zifunyenwe kumakhaya amadala, ezi zinto zenziwe zintsokothile njengoko zihlala ziqingqiwe ngesandla.
Ukucoca amanzi ngokufudumeleyo kwenziwa ngomthi, nangona kunjalo kungafunyanwa nakwiiplastikhi nakwibhodi yefayibha. Kwigumbi lokuhlambela kuyinto engaqhelekanga ukufumana i-wainscoting eyenziwe kwithayile, ilitye okanye izinto ze-acrylic ezinokunyamezelana okuphezulu kwiindawo ezimanzi.
iilokhwe ezimfutshane zangokuhlwa zemitshato
Ngelixa ukugoba iinkuni kwigumbi lokuhlambela kukhangeleka kunomtsalane kwaye kubonelela ngesimbo sendabuko, kukho ezinye iimfuno ezifunekayo ukuze ugcine ujongeka umkhulu. Kuba igumbi lokuhlambela yindawo yokufuma ephezulu ngumbono olungileyo ukunyanga i-wainscoting yakho ukukhusela ngcono ubuhle bayo. Ukongeza i-shellac okanye i-latex based primer kuyacetyiswa ukuphucula ukubambelela kwepeyinti kunye nokutywina ingqolowa. Nje ukuba ufake isicelo sokuqala unokupeyinta iinkuni ngepeyinti ye-latex okanye ye-polyurethane.
Ngokwesiko, ukulinganisa ukulinganisa ukuphakama kwesihlalo sokubuyela umva njengoko ukubumba okuphakathi (okwaziwa ngokuba sisihlalo sikaloliwe) kwakenzelwe ukunceda ukukhusela iindonga / iphepha lodonga kumonakalo xa isitulo sityhalelwa eludongeni. Kwigumbi lokuhlambela, ukuphakama kwe-wainscoting kuhlala kuxhomekeke kwindawo yesicelo.
Isetyenziswa kakhulu ngasemva kwegunjana lamanzi, kumampunge okanye kwiindonga ezijikeleze ibhafu. Kuqhelekile phakathi kwe-intshi ezingama-32 ukuya kuma-intshi ama-42 ukuphakama.
Iifestile ezinkulu zigudle udonga lweli gumbi lokuhlambela kushiya kuphela indawo encinci phantsi kweefestile zebhedi yebhodi. Ukutshatisa iingcango ezifakwe ezimhlophe kunye neefestile, oku kujoyina kunye nomdlalo webhodi esekwe kubuhle obukhoyo bendawo.
Ukwahluka kuninzi lwezimvo zokuhlambela ezisebenzisa udonga olisiqingatha olu luyilo lusebenzisa iphaneli epheleleyo yodonga. Ukutshatisa ukubukeka kweklasikhi kule ndlu yokuhlambela inkulu iya kuyo, ifestile ye-bay enebhabhu ezimeleyo isebenzisa iipaneli ezimhlophe eziphakanyisiweyo ezindongeni ukufezekisa ukubukeka kwayo okuqhelekileyo kunye nobuhle.
Iipaneli zebadibhodi zikhupha ngokulula ilizwe / i-rustic vibe nakweyiphi na indawo. Kwigumbi lokuhlambela elincinci, kwakusetyenziswa i-beadboard wainscoting. Kwaye endaweni yeepaneli zomthi ezi-3 ukuya kwezi-4 ezi-intshi, iibhodi ezincinci zomthi zazisetyenziselwa ubunjani obucocekileyo kunye nokulunga ngcono indawo encinci yodonga. Idityaniswe nodonga olutyheli olutyheli kunye nembonakalo yeklasikhi yokulungiswa kwendlu yangasese, eli gumbi lokuhlambela linomdla ngokuqinisekileyo lizisa ilizwe elihloniphekileyo.
Njengoyilo lwangaphambili lokuhlambela oku kuncinci kakhulu, kwaye ke kuncipha imitya yomthi isetyenziselwa ukubekwa kwebhodi yebhodi. Qaphela ukuba i-wainscoting yafakwa kuphela kwiindawo ekungalindelwanga ukuba zifakwe emanzini.
Uvavanyo lwe-Beadboard lwalusetyenziswa nakwigumbi lokuhlambela, apho lalifakwe khona kwiindonga zangasese, nakwiindonga ezijikeleze ibhafu. Ukufakwa kwe-wainscoting kufakelwe isiqingatha sokuphakama kodonga, oluphakame kancinci kunesiqhelo, kodwa kunethuba lokwenza iswitshi yokukhanyisa kunye neendawo ezikhuselayo eludongeni zidibanise.
Kuba ibhafu yokuma simahla iphantse yajongana ngqo nodonga apho kufakwa khona i-wainscoting, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kungangcono ukusebenzisa izinto ezinje nge-PVC okanye iithayile ukunqanda ukufuma kunye nomonakalo wamanzi.
Le ndawo yokuhlambela ngokuqinisekileyo iya kumxholo omanyeneyo kunye nekhabhathi yayo kunye nokusongelwa. Kuthathwe i-mile eyongezelelweyo ukunika zombini iindonga ngempumelelo kunye neziqwenga zefanitshala ezakhelweyo ukubonakala okufanayo, okukhokelela kubukhazikhazi obuhle kakhulu. Le ndlu yokuhlambela isebenzisa iphaneli ephakanyisiweyo yokugqitywa kwepeyinti kunye nokugqitywa kwepeyinti kwakudala, kudityaniswa namabala egolide ekubunjweni kwesakhelo ukuqhubela phambili kugxininisa kwiinkcukacha zayo. Ukufakwa kwe-wainscoting kusetyenziswe eludongeni ecaleni kwebhafu yokudityaniswa komthungo kunye nokugcinwa kwishelufa ephezulu, kunye nokungento yento eyakhelweyo kunye neekhabhathi.
I-Shiplap ibonakaliswa ngamaplanga amade anendawo encinci phakathi kwebhodi nganye efana nale uyibonayo ngaphandle kwekhaya lesitayile sakwantu. I-shiplap yangaphakathi ingaqwalaselwa njenge-wainscoting xa iipaneli zayo zibekwe kwinqanaba lokuphakama kwesihlalo okanye ukuya kuthi ga kuma-32 ″ ngaphezulu komgangatho.
Horizontal shiplap wainscoting yafakwa ecaleni kodonga apho ibhafu ekhululekileyo ihleli ngokuchasene nokuqhubekeka ukugxininisa ububanzi kunye nobungakanani begumbi lokuhlambela. Iibhodi zomthi ezibanzi zazisetyenziswa kolu fakelo.
Ngokungafaniyo neminye imizekelo yokuma kwe-shiplap wainscoting, le ndawo yokuhlambela isebenzisa iipaneli zomthi ezibanzi endaweni yeepaneli ezincinci, inika ukucoceka nokulula. Uncedo lweebhodi ezibanzi kukuba kuya kuba lula kwaye kukhawuleze ukufakelwa, kwaye kube lula ukuyigcina njengoko iya kuba nemijelo engaphantsi, imiphetho kunye neekona ezizokugcinwa.
Igumbi lokuhlambela elicocekileyo lisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zokugqiba ukwenza uyilo lwangaphakathi olunomtsalane. I-White shiplap wainscoting share zabelana ngodonga olunye kunye nodonga lwangaphambili lwezitena lwesiqingatha esingaphezulu.
Kwigumbi lokuhlambela elincinci, ukubonwa kwe-wains kuqhele ukusetyenziswa emva kwekhabethe lamanzi okanye ngasemva kwento engento / yesinki. Ngenxa yokuba igumbi lokuhlambela lihlala libonakalisiwe ukufuma kunye nokufuma, kubalulekile ukuba ukhethe izinto ezifanelekileyo ezifanelekileyo kwizicelo zangasese, kunye nokuqinisekisa ukuba zifakelwe kwaye zigqitywe ngokufanelekileyo ukunqanda ukungunda, ukugoba kunye nokunye umonakalo onxulumene nokufuma.
Zama ukunqanda ukusebenzisa izinto ezintsonteka lula xa ziveliswa emanzini okanye ukufuma okufana ne-MDF okanye iibhodi zamasuntswana. Izinto ezikhethiweyo ziya kuba yimithi ephathwa yimozulu, iplywood, i-PVC kunye neethayile, phakathi kwabanye. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ukufakelwa kunye nokugqitywa kokucoca i-wainscoting kubaluleke kakhulu njengesixhobo sayo, kwaye kuya kuba yinto ebalulekileyo kubude bexesha lokuvota kwakho.
Ukongezwa kwe-wainscoting kule ndawo yokuhlambela encinci kuyinika ngakumbi i-rustic romantic vibe. Iibhodi zebhedi emileyo yongeza ubume ngakumbi kunye nobunzulu, kwaye ngumahluko olungileyo ngokuchasene neendonga ezipeyintwe ngwevu. Ubumba eludongeni olusetyenziselwa ngaphezulu kweebhodi ezimileyo zineprofayile ebhengezwe ngakumbi, ekuvumela ukuba ubeke izinto ezincinci kuyo, iibhotile ezincinci zezinto zokuthambisa kunye nezinye, ngelixa zihlala zingacacanga.
Imizekelo yangaphambili yeengcamango zokuhlambela iimpahla zokuhlambela ziye zenziwe nge-white-paint, kodwa nayiphi na enye into yokugqiba isenokusebenza ukufakela izindlu zokuhlambela, ezifana ne-beadboard ene-walnut. Iibhodi ezimxinwa ezithe nkqo zazinepeyinti encinci yokubumba ukuze ijongeke ngokulinganayo kunye neepaneli zebhedi yebhodi.
Ukusetyenziswa kwebhodi yebhodi yebhodi ephezulu ye-beadboard kule ndawo yokuhlambela encinci kunceda ukwenza le ndawo incinci ibonakale iphezulu kunokuba injalo.
Akunyanzelekanga ukuba wenze zonke iindonga zakho ngokuwola. Ngamanye amaxesha, unokusebenzisa udonga olunye ukuba usebenze njengodonga lwakho lwesandi, kwaye kule meko, udonga kanye ecaleni kwekhabethe lamanzi. Ukuphakama okuphakathi kokuphakama kunceda ithoni phantsi kwepeyinti yodonga lweorenji kwaye inceda ukudala indawo ekugxilwe kuyo kule ndawo incinci. Bona Okuninzi Imibono yepeyinti yangasese Apha.
isipho kumyeni onayo yonke into
Iithayile zeCeramic kunye ne-porcelain ngoku zinemibala eyahlukeneyo, ukugqitywa kunye nokwenziwa. Iithayile zinokulingisa inkangeleko yezixhobo zendalo (ezinje ngomthi kunye nelitye), ziindleko eziphantsi, ulondolozo olusezantsi kwaye zihlala ixesha elide kakhulu. Kwiindawo ezinje ngegumbi lokuhlambela elisoloko liveliswa kukufuma kunye namanzi, ukusebenzisa iithayile xa uphonononga i-wainscoting kukhetho olusebenzayo kwaye kuyaqhubeka ukufumana ukuthandwa phakathi kwabanini bamakhaya ngenxa yokuzinza kwayo ngaphandle kokukhathazeka.
Enye into esebenzayo, ehlala ixesha elide kwaye kulula ukuyigcina ingenye yeenkuni kunye ne-pvc yewinscoting kukusebenzisa iithayile. Lo mzekelo ubonisa iithayile ezimhlophe ezenziwe ngombala ezifakwe njenge-wainscoting ezindongeni. Oku kudityaniswe nokubumba okucothayo kwe-PVC ukuvala imiphetho ephezulu, ukuyenza ibonakale icocekile kwaye yongeza ubunzulu.
Ungasebenzisa iithayile zendlela ehamba ngaphantsi komhlaba njengempahla yokuhambisa iimpahla. Iithayile zangaphantsi zongeza ubume ngakumbi kunye nobuntu nakweyiphi na indawo, efikelelekayo kwaye okwangoku imeko. Iithayile ze-ceramic ezenziwe nge-beveled zinika naluphi na udonga olungaphezulu kobunzulu kunye nokuthungwa, kwaye ikwanika ilizwe elifanayo i-rustic vibe wood wainscoting.
Inomfanekiso wethayile emhlophe engaphantsi komhlaba kunye noyilo lokucoca ulwakhiwo lokuhlambela oluhle lubonisa indawo yokuhamba ezimeleyo, ii-shutter zokutyala kunye nepeyinti eludongeni engwevu.
Ukujonga okwangoku okwenzekayo kwaye kulula ukuyigcina, kutheni ungasebenzisi iinkuni ezinkulu ukugqiba iithayile zekheram njengokujikeleza kwakho? Ungasebenzisa ukubunjwa kwe-ceramic kunye nokuphakamisa imiphetho, okanye i-PVC yokubumba kumbala ofanayo ukuyigqiba ukucoceka. Umthi ujonga iithayile ujongeka unomtsalane njenge igumbi lokuhlambela kwaye kulula ukuyicoca nokuyigcina.
Isipho seminyaka engama-30 somfazi
ukhetha igama elitsha lokugqibela
ingcali yesayensi ingatshata isazi senzululwazi
izipho zokukhumbula isikhumbuzo kuye